အစားအသောက်တွေကို အသီးအရွက်တွေနဲ့ ပိုမိုအသက်ဝင်လာစေမယ့် နည်းလမ်း ၁၀ မျိုး - Hello Sayarwon
အစားအသောက်တွေကို အသီးအရွက်တွေနဲ့ ပိုမိုအသက်ဝင်လာစေမယ့် နည်းလမ်း ၁၀ မျိုး
Nadi မှ ရေးသားသည်။ 10/11/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
အသီးအရွက်စားခြင်းက သင့်ခန္ဓါကိုယ်သာမက သင့်ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်လိုအပ်သည်။ ထိုကျန်းမာစေသောအစားကိုမစားပါက အစာခြေစနစ်တွင်ပြသာနာဖြစ်စေနိုင်သည်။ အသီးအရွက်များကို ဘယ်လိုစားသောက်နေထိုင်နိုင်သလဲ။
ပြုတ်စားတာကိုမကြိုက်ပါက သင်ကင်စားနိုင်သည်။ အသီးများဖျော်သောက်ခြင်း အစိမ်းစားခြင်းမကြိုက်ပါက သေးသေးလေးစီလှီးပြီး ကင်စားခြင်းကအရသာရှိနိုင်သည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဥပမာ မှို အာလူး ငရိုတ်သီး ကန်စွန်းဥ မှန်လာဥ ခရမ်းသီး အစရှိသည်တို့ကိုလည်းကင်စားနိုင်သည်။ အသီးများဆိုလျင် နာနတ်သီးလည်းစားလို့ကောင်းသည်။
လှီးထားသော ကြက်သွန် အာလူး ပဲ ကိုသင်ကြိုက်သောအစာထဲထည့်စားခြင်းက အရသာရှိစေရုံမက အာဟာရပမာကိုလည်းမြင့်စေသည်။
အီတလီအစားအစာများ ဥပမာ ပါစတာ ကိုအသီးအရွက်ထည့်စားခြင်းက အရသာရှယ်ကောင်းစေသည်။ ဥပမာ လှီးထားသောကြက်သွန် အာလူး ပဲ ငရုတ်သီး ဟင်းနုနွယ် များကိုသင့် ပါစတာဟင်းထဲထည့်စားနိုင်သည်။
လှီးထားသောကြက်သွန် အာလူးပဲသီး ငရုတ်သီး ဟင်းနုနွယ်အစရှိသည်ကို ထည့်သုပ်စားသောက်နိုင်သည်။
သင်အသီးအရွက်ထုပ်ထိုးမျိုးသိပ်မကြိုက်ပါက အသီးဟာနှင့်စားနိုင်သည်။ သူတို့က အစားအသောက်မှန်စေရုံမက အာဟာရပါဝင်မှုကိုလည်းမြင့်စေသည်။
သင်ဟင်းလျာအတွက် ပဲ မှို မှန်လာဥ ပန်းဂေါ်ဖီ စသည်တို့ကိုထည့်မွေစားသောက်နိုင်သည်။
လှီးထားသော ကြက်သွန် အာလူးပဲ ငရုတ်သီး ထောပတ်သီး ဟင်းနုနွယ်စသည်တို့ကိုထည့်စားနိုင်သည်။
ကလေးများသာမက လူကြီးများလည်း ဖျော်ရည်ကိုကြိုက်သည်။ အမြင်လှသကဲ့သို့အရသာလည်းရှိသည်။ လွယ်ကူစွာသယ်ယူသောက်နိုင်ပြီး သင့်အစာခြေစနစ်အတွက်လည်းကောင်းသည်။ ခရမ်းချဉ်သီး ထောပတ်သီး မုန်လာဥ ဟင်းနုနွယ် စတော်ဘယ်ရီ အစရှိသည်တို့နှင့်လုပ်နိုင်သည်။
ထိုသို့ထည့်စားခြင်းက အရသာရှိစေရုံမက သင့်အရေပြားအတွက်လည်းကောင်းသည်။
ပုံမှန်လူများက အသီးအရွက်စားရန်ဆန့်ကျင်တတ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အသင့်စားအစား အမြန်စားအစာ အအေးများကပိုအရသာရှိနိုင်သည်။ ကံကောင်းစွာ ထိုအချက်များနှင့် သင်နေ့တိုင်းအစာကိုအရသာရှိပြီး အာဟာရပြည့်ဝစေသည်။
10 Tips: Liven Up Your Meals with Vegetables and Fruits. https://www.choosemyplate.gov/ten-tips-liven-up-your-mealsAccessed March 1, 2017
12 Ways to Eat More Vegetables and Fruit. http://www.cookinglight.com/healthy-living/healthy-habits/eat-vegetables-fruitsAccessed March 1, 2017
Liven up your meals with vegetables and fruits : 10 tips. https://mospace.umsystem.edu/xmlui/handle/10355/51908Accessed March 1, 2017
အချိန်တိုအတွင်းမှာ မြန်မြန်ဝိတ်ချ တာ ကောင်းသလား။
မုန်လာဥနီ အရွက် စားလို့ရလား ......